ဘလော့ခေါင်းစဉ်ရှေ့က ပုံလေးနဲ့အလှဆင်နည်း ~ သဘာဝရဲ့အာဟာရ
သည်တစ်ခါ တင်တဲ့ အကြောင်းရာလေးကတော့ မိမိတို့ဘလော့ရဲ့ Title ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်ရှေ့မှာ ပုံလေးတွေနဲ့ အလှဆင်နည်းလေးပါ။ ကျနော် ထည့်ပြထားတဲ့ ပုံလေးကို ကြည့်လိုက်ပါ
ပထမဆုံး ပုံလေးတွေ ရှာဖွေဖို့ www.google.com မှာ 'animated picture' ဆိုပြီးရှာလိုက်ပါ။
ပုံရဲ့လင့်ကိုယူနည်း ။ ၁ ။
မိမိတို့ လိုခြင်သော ပုံတွေ့ပါက ညာကလစ်ပေးလိုက်ပါ နောက် properties ကိုကလစ်ပါ... အဲမှာ ဇယားကွက်လေးတစ်ခုကျလာမယ်. location ဆိုတဲ့နေရာက လင့်ကိုယူလိုက်ပါ... ပုံရဲ့လင့်ကို ရပါပြီနော်...။ ။
ပုံရဲ့လင့်ကိုယူနည်း ။ ၂ ။
လိုခြင်တဲ့ပုံကို ညာကလစ်ပေး Save Image As ကိုကလစ်ပြီး ဆေ့ထားလိုက်ပါ. ဆေ့ထားတဲ့ ပုံကို www.minus.com ဆိုဒ်မှာ Upload တင်လိုက်တာနဲ့ Direct Link ဆိုတာကို ယူလိုက်ပါ... ပုံရဲ့လင့်ကိုရပါပြီ။
ကဲဗျာ ပုံကိုလင့်ယူတာတော့ ရပြီ...ဘလော့ပေါ်ထည့်နည်းလေးကို စလိုက်ကြရအောင်နော်...
သည်ကုဒ်ကိုရှာပါ တွေ့ပြီဆိုတာနဲ့ သူ့ရဲ့အပေါ်ကနေ အောက်ကကုဒ်ကို ထည့်ပေးလိုက်ပါ။
<img src=" ပုံရဲ့လင့်ကိုသည်မှာထည့်ပေးပါ " style="border-width:0px"/>
ကဲမိတ်ဆွေတို့ အဆင်ပြေလောက်ပါပြီနော်... အနော် မန်မန်စားလိုက်အုံးးမယ်ဂျာာ